Sida loo Beddelaan iyo Guba M4V in DVD on Mac / Win (Windows 8 ka mid ah)
> Resource > DVD > Sida loo Beddelaan M4V in DVD ee Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)
Maalmahan, wax soo saarka Apple ee la mid ah iPod, iPhone, iyo Lugood Store, waxa ay noqonayaan iyo aad u badan oo caan ah, si files M4V noqonayaan kuwo si weyn loo isticmaalo. Si kastaba ha ahaatee, kaliya iyaga waxaad ka daawan kartaa on your computer. Waa hagaag, ha ka welwelin. Haddii aad rabto in aad ku raaxaysan M4V videos on DVD ciyaaryahan, kaliya badalo files M4V (videos, filimada ama ay muujinayso TV) gatay dukaanka music Lugood in qaab DVD si aad iyaga u ciyaari lahaa ciyaaryahan DVD joogto ah, TV-weyn screen, ama kaliya u gurmad.
Halkan waxaan si toos ah aad ku talin ah DVD abuure dhawaaq si lagaaga caawiyo in aad ku gubi M4V in DVD si fudud oo degdeg ah oo ku saabsan PC (Windows 8 taageeray) iyo Mac (Snow Leopard, Libaaxa ka mid ah): Wondershare Video Converter ( Video Converter Ultimate for Mac ). Ka sokow gubanaya oo dhan loo jecel yahay videos, oo ay ku jiraan M4V, AVI, Mpg, MP4, wmv, MOV, iwm. si DVD xawaare onkod degdeg ah oo ku salaysan tayo wanaagsan leh, waxa kale oo ay bixisaa lacag la'aan ah dhisay-in editor video, kala guurka video oo lagu furdaamiyo iyo DVD menu si xor ah u retouch aad videos ku qasabno!
Free download M4V in DVD Converter:
Sida loo badalo M4V in DVD si fudud oo dhaqso
Tallaabooyinka hoos ku adeegsanayaa Screenshot Windows in uu ku tuso sida loo sameeyo DVD ka files M4V istareexsan (Windows 8 taageeray).
Tallaabada 1. files Load M4V barnaamijka
Guji "Guba"> "Add Files" ama jiidi files si dar videos M4V aad u baahan tahay si ay u gubaan galay M4V ay u DVD gubi. Abaabulaan DVD horyaal oo dhigay amar video sida aad jeceshahay. The video editor dhisay-in aad u saamaxaaya in ay astaysto aad videos by lana siii videos, qoqobada videos, falinjeeerka videos, iwm
Tallaabada 2. Dooro DVD menu iyo nooca wax soo saarka
Guji "Change Template" in ay doortaan aad DVD menu la doonayo ama "No menu" style. Ka dib markii in, waxaad ku dari kartaa oo aad soo jeeda music jecel yihiin ama sawir, ka dibna riix play inay iyaga ku eegaan.
Tallaabada 3. Guba M4V video inay DVD (Windows 10 ka mid ah)
Haddii la soo saarka ku qancay, hadda aad gelin kara DVD disc ama ay doortaan in ay gubi in folder DVD ama faylasha ISO. Ka dib markii in, guji "Guba" badhanka si ay u sameeyaan DVD ka files M4V.
Talooyin: Goobta disc firaaqada waxaa ku cad ugu hooseysa. Waxaad dooran kartaa nooca disc u dhexeeya "DVD5 (4.5G)" iyo "DVD9 (8.5G)" iyo tayada video sida "High Quality", "Standard" ama "taam u disc" ah.
Badan oo ku saabsan qaab M4V
M4V (MPEG4 Video) waa mid aad u dhow in ay qaabkan u MP4 oo caan ah. Mararka qaarkood, kaliya aad u baahan tahay in la beddelo M4V in MP4 in la aqoonsado iyo ciyaaray ciyaartoyda MP4 guud. Si kastaba ha ahaatee, si ay u sameeyaan M4V play on DVD ciyaaryahanka. Waxaad u baahan tahay si ay u gubaan M4V in video disc. Waa fikrad wanaagsan in la sameeyo DVD ka badan files M4V si loo badbaadiyo lacag iyo waqti.